Global Voices teny Malagasy » Repoblika Demokratikan’i Kongo: Ireo Olo-malazan’i Rhumba, Omaly Sy Anio · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Septambra 2017 16:02 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Nandika (fr) i Claire Ulrich, Sylvia Aimée
Sokajy: R.D. Kongo, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Tahaka izay nomarihin'i François tao anatin'ny lahatsorany Du Cabiau à Kinshasa  [Fr], “Ny mozika sy ny dihy angamba misy hifandraisany amin'i Jesosy, ny sehatra mikasika ireo antom-piainan'ny ankamaroan'ireo Kongoley”. Mba hahafantarana ny fitiavana tafahoatra hifanakalozan'ireo mpankafy mozika kongolezy an'ireo vaovao mahakasika ireo olo-malaza ary hampitahany ireo kalitaony, ampy ny mitsidika fotsiny ireo vovonana sahala amin'ny AfroMix , AfricaAmbience  ary ny CongoPage  [Fr]. Kanefa, na eo aza ny halehiben'ny lazan'ny mozika kongolezy eo amin'ny tanibe afrikana, mbola somary milamindamina ihany ny tontolon'ny blaogy momba io resaka io.
Iray amin'ireo maningana tsy manaraka fitsipika ny Fally ‘diCaprio’ Ipupa , izay nanokatra ny blaoginy manokana tamin'ny fiandohan'ny taona lasa teo mba hampahafantarana ny kapilany voalohany mandeha irery, Lalana Mahitsy. Nahazo fahombiazana goavana ilay kapila, saingy ny blaoginy (amin'ny fiteny frantsay sy anglisy) tsy nohavaozina hatramin'ny fivoahan'ny lahatsoratra, ny volana aprily, nulazany ny fitetezana eoropeana nataony. Tamin'ny famakiana ireo fanehoankavitra marobe, tsapa fa miezaka mamaha olana iray momba ny “fijirihana ara-informatika” ny blaoginy ilay mpihira. Azo jerena ny lahatsarin-kiran'i Fally izay mandihy sy mihira miaraka amin'i Ferre Gola eo amin'ny Congo Music Connect  [Fr]. Io mpihira io izay teo aloha niaraka tamin'i Werrason, no nalain'i Kofi Olomide vetivety ary ankehitriny manana tarika azy manokana.
Atolotry ny Le Congo c’est là  ho an'ireo mpakay azy i Joe Kizi, “tanora iray mpanantalenta amin'ny mozika kongolezy maoderina izay mivoatra ao Lubumbashi. Miampitampita eo amin'ny Zouk, ny rumba ary ny RnB izy”, ary manome rohy mankamin'ny tafatafa iray niarahana tamin'ilay mpihira ao amin'ny Onjampeo Okapi  [Fr] (onjampeom-pirenena vatsian'ny Firenena Mikambana sy ny Fikambanana Hirondelle, vola).
Raha ireo hira klasika angitara rhumba tamin'ny “vanim-potoana tsara” no tianareo, vao avy napetraky ny blaogy afrikana sangany amin'ny mozika MP3, Benn loxo du taccu, ao amin'ny tambajotra ny ampahany iray mahafinaritra an'ny African Orchestra Fiesta avy amin'ny rakikira iray atao hoe The Sound of Kinshasa (ny feon'i kinshasa). Faritan'i Matt, mpanoratra ny Benn Loxo, ho sahala amin'ny “malefaka, mpanonofinofy… ary mila ho hawaiïen” izy io. Tena gitara hawaiïenne an'i Docteur Nico mihitsy no resaka, ary azo henoina saika any anatin'ireo ampahany an'ny Orchestra Fiesta, izay maro no nivoaka teo ambanin'ny marika Ngoma. Ho an'io marika io ny fanomezam-boninahitra ataon'ny blaogy Excavated Shellac ,[En], blaoginà mozika ho an'ireo mampanembonembona ny kapila “78 tours”.
Ho famaranana, hiverina amin'ny ankehitriny sy amin'ireo kanto plastika isika: manana vaovao manan-danja momba ny Kin-Be-Jozi  ny blogazine afrikàan tatsimo Represent  [En], “tetikasa ara-javakanto iray nifandrimbonan'ireo mpanakanto dimy avy ao Jozi (Johannesberg, Afrika Atsimo), Berne (Soisa) ary Kinshasa (Repoblika Demaokratikan'i Kongo), anjara tamin'ity taona ity, mba hitrandrahana ireo endrika samihafa ananan'ireo tontolo andrenivohitra misy antsika.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/04/106366/
 Onjampeo Okapi: http://www.radiookapi.net/
 Benn loxo du taccu, : http://bennloxo.com/archives/2007/06/13/the-zairean-island-life/